အင်တာဗျူး | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 12
Interview with U Win Tin - ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၊ အမတ်လောင်းများနဲ့ ပြည်သူ့မျှော်လင့်ချက်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘာပြောချင်သလဲ …. (မဲဆောက်က အသံများ)
ဇွန် ၃၊ ၂၀၁၂ ကိုသင့်မြတ် မေးမြန်းရေးသားသည်။ ဒီကနေ့ ၂၀၁၂ ဇွန်လ (၂) ရက် စနေနေ့မှာ ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့ကို လေယာဉ်နဲ့ နံနက် ၉း၃၀ မှာရောက်ရှိပြီး မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းကို သွားမယ်၊...
အင်တာဗျူး ဧပြီ ၂၁၊ ၂၀၁၂ Prominent leaders and stalwarts of the NLD, U Win Htein and U Win TinCopyright:Copyright ©...
အိုးဝေ ဆင်ဆာတင်မည် မဟုတ် – talk with Kyaw Ko Ko
အိုးဝေ ဆင်ဆာတင်မည် မဟုတ် အင်တာဗျူးဧပြီ ၂၀၊ ၂၀၁၂ အိုးဝေမဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာ ကိုရှိန်းရာဇာထွန်း၊ ဗကသ စည်းရုံးရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုကျော်ကိုကို No tags for this post....
Messenger News Journal ဧပြီ ၁၁၊ ၂၀၁၂ကနဦး ထွက်ပေါ်လာသော ဆူနာမီသတိပေး မြေပုံတခုတွင် မြန်မာပြည်လည်း စက်ကွင်းမလွတ်ကြောင်း တွေ့ရသည် “—ည ၇ နာရီကျော်မှ စိတ်ချရတဲ့ အနေအထားရှိတယ်—“ No tags...
Interview with U Win Tin – ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအလွန် အောက်ရေလှန်ခြင်း (back-wash) များ
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအလွန် အောက်ရေလှန်ခြင်း (back-wash) များ ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ၊ မိုးမခ၊ ဧပြီ ၁၀၊ ၂၀၁၂ ဧပြီ ၁ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး တာဝန်ယူထားရတဲ့ အထက်မြန်မာပြည်က တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်တွေအတွက် မန္တလေးမြိ်ု့တော်ကို...
Interview with U Win Tin – ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၊ အမတ်လောင်းများနဲ့ ပြည်သူ့မျှော်လင့်ချက်
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၊ အမတ်လောင်းများနဲ့ ပြည်သူ့မျှော်လင့်ချက် ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ၊ မိုးမခ၊ မတ် ၁၃၊ ၂၀၁၂ ယမန်နေ့က ဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ရာမှာ ဆက်လက်မေးမြန်းခဲ့တာကတော့ လာမည့် ဧပြီ ၁၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အင်န်အယ်ဒီက အမတ်...
DVB ပြည်တွင်းသတင်းထောက်များ တရားဝင် ရပ်တည်ခွင့်ရရေး ဦးကျော်ဆန်း စဉ်းစားပေးမည်
DVB အင်တာဗျူး ဖေဖော်ဝါရီ ၂၉၊ ၂၀၁၂ ဦးအေးချမ်းနိုင်နှင့် ဦးကျော်ဆန်း တွေ့ဆုံစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ဒီဗွီဘီ) No tags for this post. Related posts No...
YPI – ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ဒေါ်အင်ဖန်ဂျာရာ ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ဒေါ်အင်ဖန်ဂျာရာ ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေ by Yangon Press International on Saturday, 25 February 2012 at 08:25 · မြစ်ကြီးနား၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၅၊...
Khin Myat Nwe – “ ဘာမှမပြောချင်ပါဘူး မျက်နှာပဲကောင်းချင်တယ်”
“ ဘာမှမပြောချင်ပါဘူး မျက်နှာပဲကောင်းချင်တယ်” လှည်းတန်းဗုံးကွဲမှုတွင် ဒဏ်ရာရခဲ့သူ မခင်မြတ်နွယ်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း by Yangon Press International on Friday, 24 February 2012 at 07:16 ·...
Interview – ကိုဇာဂနာနဲ့ မေးခွန်းများ – အမေရိကားကို ဘာတွေ သယ်လာသလဲ
ကိုဇာဂနာနဲ့ မေးခွန်းများ – အမေရိကားကို ဘာတွေ သယ်လာသလဲ မိုးမခ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၂ စစ်အစုိုးရအဆက်ဆက်ရဲ့ ဖိနှိပ် ဖမ်းဆီး ပိတ်ဆို့မှုတွေကြားက ပြည်သူတွေကို အနုပညာတင်ဆက်သူ၊ ဝေဖန်ထောက်ပြမှုတွေပြုလုပ်သူ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ကိုဇာဂနာတယောက်...